အေရာင္တင္ ဆုိးေဆး အသံုးျပဳေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးမႈေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေစ – Barnyar Barnyar
အဆုိပါ အေရာင္တင္ ဆုိးေဆး အသံုးျပဳ အစားအစာ မ်ားမွာ မွ်စ္ ၊ လက္ဖက္ အစို ၊ အေရာင္တင္ င႐ုတ္ သီးမႈန္႔ ၊ ေရာင္စံု အေအး မ်ိဳးစံု ၊ ဂ်ယ္လီ ( ေရာင္စံု) ၊ တ႐ုတ္မွ လာသည့္ မုန္႔မ်ား ၊ ပလတ္စတစ္ ထုတ္ပုိး အစားအစာ မ်ား ၊ ပုိးသတ္ေဆး ဖ်န္းထားေသာ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ား ေၾကာင့္ အသည္း ႏွင့္ အစာအိမ္ ကင္ဆာမ်ား ျဖစ္ပြား ရလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
” ဒီဆုိးေဆး ပါတဲ့ အစားအေသာက္ ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ကင္ဆာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ႏႈန္းက တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပုိၿပီး ျမင့္တက္ လာတယ္ ၊ ကင္ဆာ ေရာဂါ ေလ်ာ့က်ဖုိ႔ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားေတြ အစားအေသာက္ ေကာ ၊ အေနအထုိင္ ေတြပါ ျပဳျပင္ သြားဖုိ႔ လုိအပ္ ပါတယ္ …. ” ဟု ၄င္းက ထပ္မံ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈ ႏႈန္းသည္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ လာခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၄ စုတြင္ တစ္စုခန္႔မွာ ဆုိးေဆးေၾကာင့္ ကင္ဆာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ၊ အခ်ိဳ႕မွာ မ်ိဳး႐ုိးေၾကာင့္ ဟု သိရသည္။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွား ခြင်းသည် အရောင်တင် ဆိုးဆေး အသုံးပြုသော အစားအစာ များ စားသုံးမှုကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗအုပ်ခိုင် က ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အရောင်တင် ဆိုးဆေး အသုံးပြု အစားအစာ များမှာ မျှစ် ၊ လက်ဖက် အစို ၊ အရောင်တင် ငရုတ် သီးမှုန့် ၊ ရောင်စုံ အအေး မျိုးစုံ ၊ ဂျယ်လီ ( ရောင်စုံ) ၊ တရုတ်မှ လာသည့် မုန့်များ ၊ ပလတ်စတစ် ထုတ်ပိုး အစားအစာ များ ၊ ပိုးသတ်ဆေး ဖျန်းထားသော ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ ကြောင့် အသည်း နှင့် အစာအိမ် ကင်ဆာများ ဖြစ်ပွား ရလျက် ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြား ခဲ့သည်။
” ဒီဆိုးဆေး ပါတဲ့ အစားအသောက် တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု နှုန်းက တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုပြီး မြင့်တက် လာတယ် ၊ ကင်ဆာ ရောဂါ လျော့ကျဖို့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေ အစားအသောက် ကော ၊ အနေအထိုင် တွေပါ ပြုပြင် သွားဖို့ လိုအပ် ပါတယ် …. ” ဟု ၎င်းက ထပ်မံ ပြောကြား ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ၁၀ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှု နှုန်းသည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက် လာခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်စု ၄ စုတွင် တစ်စုခန့်မှာ ဆိုးဆေးကြောင့် ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားကြောင်း ၊ အချို့မှာ မျိုးရိုးကြောင့် ဟု သိရသည်။
ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု နှုန်းသည် လာမည့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာ အရ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် မြင့်တက် လာနိုင်ကြောင်း နှင့် WHO ၏ အစီရင်ခံစာ တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်း ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းလုံး၌ လူပေါင်း ၁ ဒသမ ၈ သန်းခန့် ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားပြီး ၅ သိန်းကျော် သေဆုံး ခဲ့ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။